एन्ड्रोइड अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्न बटनले काम गर्दैन Androidsis
ईडर फेरेनो | | सुरक्षा, ट्यूटोरियलहरू
को एन्ड्रोइड फोनहरूसँग जान्न सजिलो तरीका छ यदि अपडेट उपलब्ध छ भने अपडेटहरूका लागि जाँचको लागि धन्यवाद। यस तरिकाले, जब हामी बटनमा क्लिक गर्दछौं हामी त्यहाँ केहि उपलब्ध छ वा छैन भनेर देख्न सक्छौं। यसैले हामी यसलाई डाउनलोड गरेर हाम्रो उपकरणमा स्थापना गर्दछौं। यद्यपि, यस्तो देखिन्छ कि वास्तविकता केहि फरक छ, जस्तो देखिन्छ प्रणालीमा एक विफलता छ.
इलियट ह्युजेस एक गुगल इन्जिनियर हुन् जसले टिप्पणी गरेका छन् कि अपडेट बटन असफल भएको छ र हाल यसले काम गर्दैन। धेरै महिना अघि देखा परेको यस्तै अवस्था। साथै, यस्तो लाग्दछ कि हामीले पनी समाधानको प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ।
En सेप्टेम्बर अपडेट बटनमा बग थियो, जुन भाग्यवश समाधान गरियो। तर तीन महिना पछि त्यहि अवस्था दोहोरिन्छ। थप रूपमा, यस्तो देखिन्छ कि यस अवस्थामा हामीले समाधान आउनको लागि २०१ 2018 सम्म पर्खनु पर्नेछ।
स्पष्ट रूपमा, गुगल ईन्जिनियरले टिप्पणी गरेको अनुसार Google अपडेट प्रणाली असफलतामा अपडेटमा गुगल प्लेमा परिवर्तन गरियो। यी परिवर्तनहरूले OTA संस्करणहरू डाउनलोड गर्न काम नगरेका कारण विकल्पलाई जिम्मेवार बनायो। त्यसैले त्यहाँ हुन सक्छ प्रयोगकर्ताहरू जसले अपडेट प्राप्त गरेनन् यो समयमा। यदि त्यो केस हो भने, समस्याको स्रोत यो हो।
अहिले यो गल्ती कहिलेदेखि सक्रिय रहेको छ थाहा छैन। यो पनि थाहा छैन कि यसले एक प्रस्ताव प्रस्ताव गर्न कहिले लिने छ। यो २०१ 2018 मा आइपुग्छ भनिन्छ, यद्यपि यसको बारेमा धेरै कुरा प्रकट गरिएको छैन। त्यसैले यो एक छ एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको लागि ध्यानमूलक मुद्दा.
यो एक धेरै गम्भीर बग हो, जबकि राम्रो खबर यो हो धेरै निर्माताहरूले आफ्नै ओटीए अपडेट प्रणाली प्रयोग गर्छन्। यसको मतलब तिनीहरू एक गुगल प्रयोगमा निर्भर हुँदैन। त्यसैले यस्तो सम्भावना छ कि असफलताले तपाईंलाई असर गर्दैन र तपाईं अपडेटहरू सामान्य रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लागि पिक्सेल र नेक्ससको साथ मालिकहरू या त चिन्ताको कुनै कारण छैन, किनकि बग यी उपकरणहरूमा निश्चित गरिएको छ।
तर अहिलेको लागि गुगल अपडेट प्रणालीमा निर्भर सबै अन्य मोबाईलहरू यस समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्. के तपाई प्रभावित भएका मध्ये एक हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » सुरक्षा » अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् केही Android मा टुक्रिएको छ